Filoham-pirenena maro :VOALOHANY TETO AMIN’NY TANTARA -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloham-pirenena maro :VOALOHANY TETO AMIN’NY TANTARA
Ny minisitra lefitra misahana ny Raharaham-bahiny Vietnamianina , SEM Hong Nam Vu no nialoha lalana ny fahatongavan’ny filoha vietnamianina Tran Dai Quang eto amintsika. Alina izy no nigadona teny amin’ny Aéroport Ivato. Hitokana ny masoivohon’i Vietnam etsy Anosivavaka Ambohimanarina, rahampitso ny tenany. Ny zoma ho avy izao kosa no ho tonga eto amintsika ny filoham-pirenena vietnamianina.
Ho fararanom-piaramanidina tokoa ny Tarmac eny Ivato. Ny zoma sy ny sabotsy izao dia Airbus, Boeing, fiaramanidina lehibe sy raitra araka ny karazany avy ho hipetraka eny an-toeerana hitondra ireo filoham-pirenena maro hanatrika ny fihaonamben’ny Filoham-pirenena mandritra ny Frankofonia. Voalohany teto amin’ny tantaran’i Madagasikara izany. Ho voasoratra sy horaiketin’ny tantara ity hetsika goavana indrindra noraisin’I Madagasikara, izay tao anatin’ny fitondran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina izao. Heni-kaja heni-boninahitra tokoa ity Nosy ity. Aty amintsika avokoa ny mason’izao tontolo izao ary miresaka ny anaran’i Madagasikara avokoa ny haino aman-jery frantsay maneran-tany. Maro an’isa tokoa ny firenena voakasik’izany Frankofonia izany satria miisa 80 ao anatin’ny kaontinanta dimy.
Ny zoma alina izao kosa no ho avy eto amintsika ny filoha frantsay François Hollande. Hiara-dia azy amin’izany ny minisitry ny Raharaham-bahiny frantsay sy ny minisi-panjakana frantsay miadidy ny Frankofonia. Ny an’ny firenena kanadianina kosa dia efa nanamafy ny fahatongavany eto ny Praiminisitra Justin Trudeau. Ankoatra azy dia efa nanamafy ny fahatongavany ihany koa ny filoha Sénégalais Macky Sall. Mbola izy mantsy no filohan’ny Oif ary araka ny fitsipika fifampitondran’ny Frankofonia dia ny filohampirenena mpampiantrano an’ilay frankofonia no mitarika izany Oif izany. Araka izany dia izy Macky Sall dia hanao famindram-pahefana amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina hitondra indray ny Oif mandritra ny roa taona. Filoha afrikanina efa nanamafy ny fahatongavany ihany koa ny filohan’i Mali Ibrahim Boubakar Keita sy ny filohan’i Tchad Idriss Déby Itno. Miisa 34 ireo filoham-panjakana sy praiminisitra vahiny ho avy eto amintsika. Ankoatra izay dia hisy minisitra misahana ny raharaham-bahiny vahiny miisa 58.
Ny lafin’ny fandraisana an’ireo vahiny aloha hatreto dia efa hita soritra fa tena nahafa-po. Vaky vava mihitsy ingahy talen’ny birao rezionalin’ny “Organisation Internationale de la Francophonie” (OIF) ho an’ny Ranomasimbe Indianina, Malik Saar, omaly , fa na fihaonambe iraisam-pirenena ambony lavitra noho ny Frankofonia aza dia mendrika an’i Madagasikara.
Antsohihy : Rava ny fikasana hanakorontana